အမှတ်တရပါ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » အမှတ်တရပါ။	8
Posted by aye.kk on Jun 9, 2015 in Photography | 8 comments
ခင်ဇော် says: ခင်ညာ။
တီအေး မှာ သား ၄ ယောက်ရှိတာ ဟုတ်လားးး
​ဒေါ် လေး says: နောက် မကျ လောက်သေးဘူး ထင်တယ် ဇီဇီ ရေ
အန်တီအေး က သားလေးယောက် ဆိုတော့ မျှားလေးစင်းပေါ့
မြစပဲရိုး says: အမေချောမှတော့ သားလေးတွေချောတာ မဆန်းပေါ့။
ဆက်စပ်ရရင် ဘပု(လေး) ကလဲ ချောမဲ့ ပုံရှိတယ်။
ရုပ်ဆောင် နေတာလေးတွေကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်နေတာလဲ ကုသိုလ်ပါဘဲလေ။ ဟိ။
တရာ မရ ပေမဲ့ ၁၂ကျပ်ရလဲ အမြတ်ဘဲ။ :-))) jk
aye.kk says: ကေဇီရေ…
ဘပုလည်းချောတယ်။ မလတ်ရဲ့ မေးလ်ထဲပို့ပေးပါ့မယ်။
Mike says: .ကြည်နူးစရာပုံလေးတွေပါ….
.ကိုအောင်ပု ကိုစာတွေရေးခိုင်းပါအုံး မမအေးခင်များ
ဦးကြောင်ကြီး says: တမီးလေးပုံ တင်ဗာအူး….
manawphyulay says: ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် အေးချမ်းလှပါတယ် တီအေးရယ်…